रजनीकान्तको २.०– चर्चाबढी गरिएको फितलो फिल्म
रजनीकान्त र अक्षयकुमार स्टारर फिल्म २.० को चर्चा यतिवेला व्यापक छ । रजनीकान्तका फ्यानहरुले फिल्म रिलिज भएसँगै फिलिम हलहरुको बाहिर पोस्टर टाँगेर पूजा गरेको दुध चढाएको समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् ।
भारतीय फिल्म उद्योगको सबैभन्दा महँगो फिल्म समेत रहेको २.० को चर्चा विभिन्न कारण बाट भइरहेका छन् । यसअघि आएको फिल्म रोबोटको सिक्वेलको रुपमा रिलिज भएको फिल्ममा पहिलोपटक भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारले भिलेन पात्रको अभिनय गरेका छन् ।
प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै शंकरले बनाएको फिल्मको चर्चा अनुसार दर्शकलाई निराश पारिरहेको छ ।
निर्माण भएको लामो समय कुरेको फिल्मका कारण पनि आम मानिसको चासो यो फिल्ममा थियो । यसका साथै भारतीय फिल्म उद्योगमा एक पछि अर्को फिल्मको असफलताका कारण पनि रजनीकान्त र अक्षयको फिल्म रोमाञ्चक र अविष्मरणीय हुने अधिकांशको अनुमान थियो तर कथात्मक प्रस्तुती भने फितलो रहेको फिल्म हेर्नेहरुले अनुभव गरेका छन् ।
प्रविधिको प्रयोगले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको परिणामलाई फिल्मले देखाउन खोजेको छ । तर त्यसको प्रस्तुतीकरण फितलो भएको आभाष हुन्छ ।
पहिलो फिल्म रोवर्टमा कथावस्तु आकर्षक रहेको र प्रविधिको प्रयोगपनि राम्रोसँग गरिएका कारण धेरै २.० रोवर्ट भन्दा उत्कृष्ठ हुने अनुमान गरेका थिए ।
फिल्मका लेखक÷निर्देशन शंकरले फिल्म निर्देशनका क्रममा इस्पेसल इफेक्टहरुमा ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् ।
तर उठान गरिएको विषयप्रतिभने फिल्म हेर्नेको समर्थन रहेको छ मात्र त्यसको प्रस्तुतीकरण कतै चुकेको आभाष हुन्छ ।
कथाको सुरुवात एकजना व्यक्ति पन्छिराजन(अक्षयकुमार)ले टेलिफोनको टावरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेसँगै सुरु हुन्छ । तामिलनाडुका मोबाइल उपभोक्ताको हातबाट मोबाइलहरु गायब हुन्छ । व्यक्तिका साथै मोबाइलपसलहरुबाट समेत मोबाइल गायब हुन्छ तर कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । जसमा कारण शहरमा आतंक नै सिर्जना हुन्छ ।
त्यसको खोजीका लागि रजनीकान्तले प्रयास गर्छन् । र एक स्थानको खोलामा सबै मोबाइलहरु देख्छन् तर त्यो चराको रुपमा उडेर विध्वंस गर्न थाल्छ । त्यसपछि डा. वसीकरण( रजनीकान्त)ले रोबोर्ट फिल्मको चिट्टीलाई फेरि ‘रिलोड’ गरिन्छ । अपडेट गरिएको भर्सन भएका कारण फिल्मको नाम २.० राखिएको हो ।
चिट्टी र चरा आकृतिको राक्षसबीच लडाइ हुन्छ । उक्त चरारुपी राक्षस कोही नभएरु चराविज्ञ पन्छिराजन( अक्षयकुमार) हुन्छन् ।
पन्छिराजन(अक्षयकुमार)ले किन सबै मोबाइललाई थुते, शहरमा विध्वंश मच्चाए भन्ने घटना फिल्मको दोस्रो हाफमा देखाइएको छ ।
चरालाई माया गर्ने अक्षयकुमारले किन आत्महत्या गरे र विध्वंस मच्चाए भन्ने फिल्ममा देखाइएको छ । फिल्मले यो संसार मानिसको मात्र होइन अन्य जीवको पनि हो भन्ने कुरालाई प्रस्तु गर्न खोजेको छ । मानिसले आफ्नो स्वार्थका लागि अन्य जीवको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै यसको प्रयोग सकारात्मक रुपमा हुनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । तर त्यति दमदार कथा फिल्ममा पाउन सकिँदैन ।
मोबाइल हराएको घटनाबाट सुरु भएको फिल्मको पहिलोहाफसम्म दर्शकले फिल्ममा के भइरहेको छ भन्ने मेसो पाउन सक्ने अवस्था छैन । मोबाइल हराउने र ठूलो चराले वा मोबाइलले नै विभिन्न आतंक सिर्जना गरेको दृश्य देख्न पाइन्छ । दोस्रो हाफदेखि केही कथात्मक भएपनि त्यसपछिका द्वन्द्व सामान्य लाग्छन् ।
मोबाइल रेडियसका कारण पन्छिहरुलाई हानी पुगेको र आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको फिल्ममा देखाइएको छ । तर रेडिएसन विरुद्ध पन्छिराजनको अभियानलाई पनि कमजोर रुपमा देखाइएको छ ।
कथाबस्तुसहितको फिल्म खोज्नेहरुका लागि यो फिल्म सामान्य नै छ ।
भीएफएक्सको बेजोड प्रयोग गरिएको भएपनि फिल्मको कथा कमजोर देखिएको छ ।
मंसिर १५, २०७५ मा प्रकाशित
धनगढीमा ‘टिफिन बम’ विस्फोट : शंकाको सुई विप्लव समूहतर्फ, मृतक रामबहादुरले बोकेका थिए बम !
वडाध्यक्ष कुटिएः तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप, गाउँबाट विस्थापित
लोकसेवाको परीक्षा बिथोल्न खोज्ने चार जना पक्राउ
सरकार र पार्टी नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति पालना हुनैपर्छ : नेता पौडेल